Cele Lifestyle Archives - Cele Gabar
March 15, 2022	Cele Lifestyle
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေမေမြင့်မိုရ်ကတော့ပန်းနုသွေး အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေစတင်အားပေးခံခဲ့ရကာအရိပ်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း စုစုလှိုင်အဖြစ် ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ပုဂံမြို့သူဇာတ်ကား မှာလည်း အစော ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု အပြည့်အ၀ရရှိထားသူလေးပါ။ Star Awards 2018 Rising Star ဆုကို လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ အမြဲအနေအေးပြီး တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်ကိုပရိသတ်တွေကချစ်စနိုးနဲ့မေလေးလို့လည်းခေါ်ကြတာပါ။.လက်ရှိမှာသူမအနေနဲ့ ပန်းချီကိုယ်တိုင်ဆွဲကာ မိခင်မေတ္တာကိုဖော်ကြူးထားတဲ့ပန်းချီပုံရိပ်လေးကို သူမရဲ့ instagramအကောင့်ကနေတင်လာခဲ့တာပါ။ သရုပ်တောင်ပညာမှာသာမက အားလပ်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာ ဝါသနာပါရာလေး​ေ​တွပြုလုပ်တတ်တဲ့မေလေးကတော့ ပန်းချီပညာကိုလည်း ဝါသနာပါသူလေးဆ်ုတာပုံလေးကိုကြည့်ပြီးိူနိုင်မှာပါနော်။ Koe- CeleGabar Source- MayMyintMo ” သ႐ုပ္ေဆာင္ပညာကိုသာမက ပန္းခ်ီပညာကိုလည္း ဝါသနာပါေၾကာင္း သူမဆြဲထားတဲ့ ခဲပန္းခ်ီလက္ရာေလးေတြကို ထုတ္ျပလာတဲ့ ေမျမင့္မိုရ္” CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရေမျမင့္မိုရ္ကေတာ့ပန္းႏုေသြး အေနနဲ႔ ပရိသတ္ေတြစတင္အားေပးခံခဲ့ရကာအရိပ္ဇာတ္လမ္းတြဲမွာလည္း စုစုလႈိင္အျဖစ္ …
January 19, 2022	Cele Lifestyle
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ အချိန်တိုအတွင်းတစ်နေ့တစ်ခြားပိုပိုအောင်မြင်လာတဲ့အပြင် ပိုပိုပြီး လှသထက်လှလာတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် (၂၀၁၈) အကယ်ဒမီရွှေကြိုမတိုင်ခင်ကတည်းက ​ခင်လှိုင်ရဲ့ အထွေးဆုံးသမီးလေးလို့ ပရိသတ်တွေ သတိထားမိခဲ့ကာ ရွှေကြိုအပြီးမှာ အနုပညာအလုပ်တွေဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်လာတာကြောင့်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်း ပိုမိုများပြားလာခဲ့တာပါ။ သဲလေးကတော့ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့အတူ အမြဲပျော်ရွှင်စဇ်ာဖြတ်သန်းကာ နာမည်ပျက်မရှိဘဲလိမ္မာရေးခြားရှိတဲ့ တက်သစ်စအနူပညာရှင်လေးဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူနဲ့လည်းအစစအရာရာတိုင်ပင်တတ်တဲ့သူလေးဖြစ်ကြောင်းကို”အနားမှာအမြဲ ရှိပေးပြီး ဘယ်အရာမဆိုသူငယ်ချင်းလိုရောအမတစ်ယောက်လိုပါ ရင်ဖွင့်ခွင့်ပေးတယ်💖အမြဲယုံကြည်ပေးပြီးချစ်ပေးတာတွေတွက် ကျေးဇူးပါမေမေ💖”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလာခဲ့တာပါ။ အမြဲရိုးသားကြိုးစားကာအေးချမ်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သ​ဇင်ထူးမြင့်ကတော့ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေတင်မက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေပါချသ်ကြရတဲ့အထိပါပဲနော်။CeleGabarပရိသတ်တွေထဲမှာရော သဇင်ထူးမြင့်လိုမျိုး အမေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းကောင်းနဲ့ညီအစ်မလိုတိုင်ပင်နိုင်တဲ့မိဘတွေပိုင်ဆိုင်ထားလားဆိုတာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။ Koe-CeleGabar Source – Thazin Htoo Myint ZawgyiFontဖြင့်ဖတ်ရန် ” သူငယ္ခ်င္းလို ညီအစ္မလို အရာရာတိုင္ပင္လို႔ရတဲ့ မိခင္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားရလို႔ မိခင္ႀကီးကို ေက်းဇူးတင္စကားဆိုလာတဲ့ သဇင္ထူးျမင့္ ” CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ သဇင္ထူးျမင့္ကေတာ့ …
” Youtube Channel မှာ Subscribersအယောက်၁သိန်းပြည့်သွားခဲ့တာကြောင့် Youtubeကပေးတဲ့ Creator Awardလေး ရရှိခဲ့ကြောင်း ဝမ်းသာစွာ ပြောပြလာတဲ့ ယွန်းမြတ်သူ”
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေယွန်းမြတ်သူကတော့လတ်တလောမှာ ပရိသတ်ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းအစားဆုံး သီချင်းရဲ့ပိုင်ရှင်လို့ဆိုရမှာပါ။ ပထမCovidကာလမှာလည်း သူမရဲ့အဆင်ပြေမနေပါဘူးသီချင်းဟာ ပရိသတ်တွေအတွက် ရေပန်းစားခဲ့ပြီး အခုဒုတိယ Covidကာလမှာဆိုရင်လည်း သီချင်းမထွက်ခင်ကတည်းကသူမရဲ့ ”နင်လမ်းတွေ့ခဲ့ရင်”သီချင်းဟာ ပရိသတ်တွေပါးစပ်ဖျားနေရာယူထားခဲ့တဲ့သီချင်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။ လက်တလောမှာလည်းအသစ်စက်စက်ထွက်ရှိထားတဲ့𝘽𝙍𝘼𝙄𝙉𝙇𝙀𝙎𝙎 Music Video လေးကလည်း ပရိသတ်ရင်ထဲကိုရောက်ရှိကာTikTokမှာလည်းလူအများကြိုက်နှစ်သက်ကာ ဆော့ကစားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း” သိက္ခာ နဲ့ ရိက္ခာ ” music videoလေး ထွက်ရှိထားပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့”Finally 💯 Youtubeကပေးတဲ့ Creator Awardလေး အယွန်းရခဲ့ပီ ❤️အယွန်း Youtube Channel ကို Subscribe ပေးကြတဲ့ Subscribers တဦးတယောက်စီတိုင်းကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်❤️🙏🏻YouTube Channel ကို Management အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတဲ့ MHC YouTube Management Team …
” ရရှိခဲ့အလှူငွေ (၁၅) သိန်းကျပ်ကို ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်းဘက်မှ သက်ကြီးဘိုးဘွား (၁၅၀) စာအတွက် လိုအပ်တာများ အသုံးပြုရန် အလှူငွေများသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ခိုင်နှင်းဝေ”
January 18, 2022	Cele Lifestyle
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ အခုလိုချိန် စားဝတ်နေရေးသာမက အဘက်ဘက်ကခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာ ဆေးကုသဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိနေကြတာပါ။ပရဟိတမင်းသမီးကြီးခိုင်နှင်းဝေကတော့ အလှူရှင်တွေဆီကရသမျှကို နေရာပေါင်းစုံကိုမျှတအောင်လိုက်လံလှူဒါန်းပေးလျက်ရှိတာပါ။ ဒီနေ့မှာလည်း” ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်းဘက်မှ သက်ကြီးဘိုးဘွား (၁၅၀) စာအတွက် လိုအပ်တာများ အသုံးပြုရန် အလှုငွေ (၁)သောင်းကျပ် (စုစုပေါင်း အလှူငွေ (၁၅) သိန်းကျပ်) အား “The Body Shop Myanmar “မိသားစု မှ နှစ်ဦး အလှုလေး အဖြစ် လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်..အလှူရှင်များနှင့် အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်များကြား အလှူမြောက်အောင် လှူဒါန်းကုသိုလ်ယူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..ပြုပြု သမျှ ကုသိုလ်တို့အား ပေးသူ၊ယူသူ၊မြင်သူ၊ကြားသူ များ အားလုံး စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာဓု သာဓု ခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေရှင်..🙏🙏🙏”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့လှူဒါန်းမှုပုံရိပ်တွေကို တင်လာခဲ့တာပါ။ ဘယ်လိုနေရာဘယ်လိုဒေသရောက်ရောက်အလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာလှူဒါန်းတတ်တဲ့ခိုင်နှင်းဝေရဲ့စေတနာသဒ္ဓါတရားကနော့တကယ့်ကိုထူးခြားလှပါတယ်။CekeGabarပရိသတ်တွေလည်း ခိုင်နှင်းဝေ မျှဝေပေးတဲ့အလှူကုသိုလ်တွေကိုသာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါဦးနော်။ …
” မိခင်ကြီးကို နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေမှာ တသီးတသန့်အချိန်ပေးကာ သွားချင်တဲ့နေရာ စားချင်တာတွေလိုက်ပို့ပေးရမှ စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ နေဒွေး”
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ နေဒွေးကတော့ အမြဲ ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူပါ။ဒါ့အပြင်ယောကျာ်းပီးသတဲ့​ဘော်ဒီဘော်ဒီကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။အိမ်ရဲ့ စီးပွားရေးကိုလည်း ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကာ မိခင်ကြီးကို လုပ်ကျွေးပြုစုနေတဲ့သားကောင်းတစ်လက်ပါ။ ဒီနေ့မှာလည်း” ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က မေမေအလုပ်အားလို့ ကျွန်တော့်ကိုအချိန်တွေပေး မုန့်တွေလိုက်ဝယ်ကျွေး လိုချင်တာတွေဝယ်ပေးပြီဆိုရင် အရမ်းပျော်ခဲ့ရတာ ခုချိန်ထိအမှတ်ရနေမိတယ်😍ကိုယ်တွေအသက်ရလာ ပြီးပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့ အချိန်မှာလဲ အလုပ်အားပြီဆိုရင် နေ့ထူးနေ့ရက်လေးတွေဆို အမြဲမေမေ့ကိုအချိန်ပေးဖြစ်တယ်🥰” “မနေ့က အမေများနေ့ ပြာသိုလပြည့်နေ့ထူးနေ့ရက်လေးမျာ မနက်ပိုင်း ဆန်ကိစ္စပြေး ညနေ လက်ခံထားတဲ့ Live Sale လွှင့်ပေး ညစရင်းလုပ်နဲ့ တနေကုန်မေမေ့ကိုအချိန်သေချာမပေးလိုက်ရလို့ ဒီနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းကစပြီးအလုပ်တွေ ဖျက်ပြီးတာနဲ့ ညနေကစပြီး မေမေသွားချင်တဲ့နေရာ စားချင်တာတွေလိုက်ကျွေးလိုက်ရမှ စိတ်ချမ်းသာသွားတယ် ❤️ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အမေတွေတိုင်းကို အသက်ရှင်နေတဲ့ချိန်မှာ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်အောင် တန်ဖိုးထားပေးကြပါနော်🙏🏼🙏🏼🙏🏼 …
“Forever groupနဲ့ ၉နှစ်တာ လက်တွဲပြီးတဲ့နောက်ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာမှမရှိဘဲ စာချုပ်ဆက်မချုပ်ဖြစ်တော့ကြောင်း အသိပေးပြောကြားလာတဲ့ ခေးဆက်သွင်”
CeleGabar ပရိသတ်ကြီး​ေရခေးဆက်သွင်ကတော့ နန်းဆန်တဲ့အလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့အပြုံးလေးတွေနဲ့ အပြူအမူအပြောလေးတွေကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူပါ။ ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ ရရင်ရသလိူ အလှူဒါန လေးတွေပြုလုပ်တတ်တဲ့မင်းသမီးလေးဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်နော်။ ဒီနေ့မှာတော့” Forever groupနဲ့ ၉နှစ်တာ လက်တွဲပြီးတဲ့နောက်ဘာပြသနာ တစ်စုံတစ်ရာမှ မရှိပဲ 2021 February ကစလို့ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်နောက်ထပ်နှစ်တိုးစာချုပ် ထပ်မချုပ်ဖြစ်တာပါ။​ဘယ်သူကမှထုတ်လိုက်တာလည်း မဟုတ်သလိုလက်တွဲခဲ့တဲ့ကာလ အတွင်းမှာလည်းမိသားစုလို ဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ကြရင်းအဆိုးအကောင်းကို နားလည်မှုနဲ့ ညှိယူရင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ .ကျေးဇူးရှင် ဆရာဦးဝင်းမော်နဲ့မိသားစု၊ လက်ဦးဆရာ ဦးသီTalent Centreမှအမ မမေသူစိုးနဲ့ TCတွေသင်ပြဆုံးမယုံကြည်ပေးခဲ့တဲ့ အထက်လူကြီးများနဲ့ဆရာသမားများလက်တွဲပြီးအတူတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ အားလုံးကိုအမြဲကျေးဇူးတင် သတိရနေမှာပါ🙏🤍”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သူမအပေါ်အထင်လွဲနေတာကို ဖြေရှင်းခဲ့တာပါ။CeleGabar ပရိသတ်တွေလည်း ခေးဆက်သွင် ရဲ့ အနုပညာခြေလှမ်းတွေ​​ရှေ့ဆက်ဖို့ အားပေးစကားပြောခဲ့ပါဦးနော်။ Koe-CeleGabar Source- Khay SettThwin …
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေသင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ အမြဲခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းကာ Gym အမြဲပုံမှန်က​စားလေ့ရှိ​တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းအပြင်းအထန်လုပ်တတ်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်အနေနဲ့ အများနဲ့မတူတဲ့ကျစ်လျစ်လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာသာတရားကိူင်းရှိုင်းကာ မိဘဆရာသမားတွေအပေါ်လည်းရိုသေတတ်တဲ့သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ အလှူအတန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း အမြဲလိုလို ကုသိုလ်ယူတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ဒါ့အပြင် သူမရဲ့မောင်နှမတွေနဲ့လည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်တတ်တဲ့သူပါ။ ဒီနေ့မှာလည်း” 1994 vs 2022″ 28 years later…ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ သူမ​တို့မောင်နှမတွေပျော်ရွှင်စွာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကို သူမရဲ့မောင်ဖြစ်သူ ညီဆက်ကျော်ကတင်လာခဲ့တာပါ။အမြဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စစနောက်နောက်နေတတ်ပြီးမောင်နှမတွေချစ်ခင်ကြင်နာကြတာတော့ပြောစရာမလိုလောက်အောင်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း သင်ဇာတို့မောင်နှမတွေရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ရှူနိုင်ဖို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Koe-CeleGabar Source-Nyi SatKyaw ZawgyiFont ဖြင့်ဖတ်ရန် ” ၂၈ႏွစ္အၾကာမွာေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေမာင္ႏွမသုံးေယာက္ရဲ႕ပုံရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပလာတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္တို႔ ေမာင္ႏွမ” CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရသင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ကေတာ့ အၿမဲခႏၶာကိုယ္ထိန္းသိမ္းကာ Gym အၿမဲပုံမွန္က​စားေလ့ရွိ​တဲ့ မင္းသမီးတစ္လက္ပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းအျပင္းအထန္လုပ္တတ္တဲ့ …
January 17, 2022	Cele Lifestyle
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်အချစ်တော်လေးစိုးပြည့်သဇင်ဟာ အသက် (၁၈ )နှစ်အရွယ်မှာ “မိုးညအိပ်မက်မြူ” ဇာတ်ကားနဲ့ အကယ်ဒမီ ဆုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆွတ်ခူးရရှိထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာသာမက အဆိုဘက်မှာလည်း ထူးခြားချိုသာတဲ့အသံလေးနဲ့အဆိုကောင်းသူတစ်ယောက်ပါနော်။ လက်ရှိမှာတော့မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ကျက်သရေရှိစွာလှနေတဲ့ မြန်မာရိုးရာရင်ဖုန်းနဲ့ချိတ်ထမိန်လေးကိုဝတ်ဆင်ကာ” မြန်မာအမျိုးသမီး”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ မြန်မာဆန်ဆန်ပုံလေးတွေကိုတက်လာခဲ့တာပါ။ ယဥ်ယဥ်လေးနဲ့မဟာဆန်ကာ နန်းဆန်လွန်းတဲ့ပုံလေးတွေကို မြင်သူတိုင်းက ချီးကျူးကာ အချစ်ပိုနေကြတာပါ။ အမြဲရိုးရိုးယဥ်ယဥ်လေးနဲ့ အနေအထိုင်သိမ်မွေ့ကာ အမြဲလိုလို ကြိုးစားနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စိုးပြည့်ကတော့ဘယ်အချိန်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်သူကြီးပါပဲနော်။CeleGabarပရိသတ်ကြီးလည်းရှူတိုင်းလှနေတဲ့စိုးပြည့်ရဲ့မြန်မာဆန်ဆန်ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ဖို့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Koe-CeleGabar Source- SoePyaeThazin ZawgyiFontဖြင့်ဖတ်ရန် ” ယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႔မဟာဆန္ကာ ျမန္မာဆန္ဆန္ရင္ဖုန္းေလးနဲ႔ရႈတိုင္းလွေနတဲ့ ပုံရိပ္ေတြကိုတင္လာတဲ့ စိုးျပည့္သဇင္” CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ေလးစိုးျပည့္သဇင္ဟာ အသက္ (၁၈ )ႏွစ္အ႐ြယ္မွာ “မိုးညအိပ္မက္ျမဴ” ဇာတ္ကားနဲ႔ အကယ္ဒမီ ဆုကိုထိုက္ထိုက္တန္တန္ဆြတ္ခူးရရွိထားသူပဲျဖစ္ပါတယ္။သ႐ုပ္ေဆာင္ဘက္မွာသာမက အဆိုဘက္မွာလည္း ထူးျခားခ်ိဳသာတဲ့အသံေလးနဲ႔အဆိုေကာင္းသူတစ္ေယာက္ပါေနာ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ျမန္မာဆန္ဆန္ေလးနဲ႔က်က္သေရရွိစြာလွေနတဲ့ ျမန္မာ႐ိုးရာရင္ဖုန္းနဲ႔ခ်ိတ္ထမိန္ေလးကိုဝတ္ဆင္ကာ” ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔အတူ …
” ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးဖြစ်လာတာဟာ မိခင်ကြီးရဲ့သင်ပြမှုတွေကြောင့်မို့အမေများနေ့မှာ မိခင်ကြီးဟာသူ့ဘဝအတွက်စံပြဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုး”
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင်တွေအားကိုးနေရတဲ့ ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးပါ။အနုပညာရှင်တွေကချစ်ကြသလို အနုပညာရှင်တွေအပေါ်မှာလည်း ဖော်ရွေတတ်သူပါ။ ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ဇန်နဝါရီလ ၁၆ရက်နေ့ကတော့ အမေများနေ့ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးကလည်း မိခင်ကြီးကို ” ကျန်တော်ကို၇တန်းကျောင်းသားဘဝထဲကစက်ချူပ်ပညာကိုသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ကျန်တော်ရဲ့မေမေပါ။ခုထိလည်းကျန်တော်ကိုသင်ပေးနေတုန်းကျန်တော်လုပ်ငန်းကိုဦးစီးပေးနေတုန်းပါပဲ။ကျန်တော်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသင်ဆရာမွေးမိခင်ပါ။ Designer မျိုးမင်းစိုးရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့တာအမေကြောင့်ပါ။အမေဟာကျန်တော်ဘဝအတွက်တော့စံပြပါလို့…………….(16.1.2022) အမေများနေ့အမှတ်တရ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့မိခင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုသတိတတ်စွာအမေများနေ့မှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးလိုမျိုး အမေများနေ့မှာ မိခင်ကြီးကို ကျေးဇူးသိတတ်စွာဂုဏ်ပြုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Koe-CeleGabar Source- MyoMinSoe ZawgyiFontဖြင့်ဖတ်ရန် ” ဒီဇိုင္နာမ်ိဳးမင္းစိုးျဖစ္လာတာဟာ မိခင္ႀကီးရဲ႕သင္ျပမႈေတြေၾကာင့္မို႔အေမမ်ားေန႔မွာ မိခင္ႀကီးဟာသူ႔ဘဝအတြက္စံျပျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳစကားဆိုလိုက္တဲ့ဒီဇိုင္နာမ်ိဳးမင္းစိုး” CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ဒီဇိုင္နာမ်ိဳးမင္းစိုးကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕နာမည္ႀကီးထိပ္တန္းဒီဇိုင္နာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အႏုပညာရွင္ေတြအားကိုးေနရတဲ့ ဒီဇိုင္နာတစ္ဦးပါ။အႏုပညာရွင္ေတြကခ်စ္ၾကသလို အႏုပညာရွင္ေတြအေပၚမွာလည္း ေဖာ္ေ႐ြတတ္သူပါ။ ဒီေန႔က်ေရာက္တဲ့ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔ကေတာ့ အေမမ်ားေန႔ျဖစ္ၿပီး ဒီဇိုင္နာမ်ိဳးမင္းစိုးကလည္း မိခင္ႀကီးကို ” က်န္ေတာ္ကို၇တန္းေက်ာင္းသားဘဝထဲကစက္ခ်ဴပ္ပညာကိုသင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့က်န္ေတာ္ရဲ႕ေမေမပါ။ခုထိလည္းက်န္ေတာ္ကိုသင္ေပးေနတုန္းက်န္ေတာ္လုပ္ငန္းကိုဦးစီးေပးေနတုန္းပါပဲ။က်န္ေတာ္ရဲ႕တစ္ဦးတည္းေသာသင္ဆရာေမြးမိခင္ပါ။ Designer မ်ိဳးမင္းစိုးရယ္လို႔ျဖစ္လာခဲ့တာအေမေၾကာင့္ပါ။အေမဟာက်န္ေတာ္ဘဝအတြက္ေတာ့စံျပပါလို႔…………….(16.1.2022) …